5 waxyaabood oo ay tahay inaad ogaato oo ku saabsan Kaamirada Muuqaalka Booliska | Xalka OMG
Kaamirooyinka jirka xiran gabi ahaanba kuma cusba qarnigan. Waxaan badiyaa aragnaa ilaaliyayaasha iyo wakiilada hawlgalka wada jirka ah ee tan u adeegsada sirdoonka inta ay shaqeynayaan. Sida teknoolojiyad kasta, kamaradaha ay xiran tahay qalabka bilaysku waxay ku noqonayaan isbeddel cusub oo ku saabsan hay'adaha sharci xoojinta casriga ah. Iyada oo ay hay'aduhu si tartiib tartiib ah ula socdaan barnaamijyadooda, waxaa lama huraan ah inay si qotodheer u eegaan nidaamka kaamirada jirka xirtay oo ay baaraan haddii ay runti u qalantay oo ay jirto cudurdaar u ah hirgalinta
Markii loo dhawaado qaabaynta aragtida dadweynaha ee arrinta, waxaa la arkaa inay jirto koror ku saabsan isla xisaabtanka iyo daah furnaanta bilayska marka lagu jiro kaamamka jirka xiran. Daraasaduhu waxay muujiyeen in dabeecadda iyo xirfadahooda lagu arkay heerkooda ugu sarreeya, runtii maahan wax cusub maxaa yeelay waa iska caadi, dadku si dabiici ah ayey u dhaqmaan si wanaagsan marka ay si joogto ah ula socdaan in laga yaabo inay dabagal ku hayaan. Waxaa loo arkaa inay ka fogaadaan adeegsiga xoogga markay lama huraan tahay ama ay ka fogaadaan adeegsiga xoogga xad-dhaafka ah ee lagu qabanayo.
Faa'iidooyinka waxaa helay sarkaal intii ay ku jireen kaamirooyinka jirka xiran
Ma ahan wax war ah in hay'ado badan oo sharci xoojin ah ay leeyihiin aragtiyo iska soo horjeeda oo ku saabsan kaamirooyinka jirka xirtay, qaar badan ayaan dareemeynin inay xiiseyneynin xirashada inta ay shaqeynayaan. Qaar ka mid ah waxtarka iyo walaacyada la arkay ayaa ah:
Markaad leedahay sawir cad oo ku saabsan aragtida qofka dhabta ah, caadi ahaan waa dhibaato marka aad xirato aalad anshax xumo iyo ku xadgudubka sharciga. Mararka qaarkood, shakhsiyaadkan si xun-xun-xun loo maamuusay ayaa lagu arki jiray iyaga oo ku labisan dharka malaa'igaha oo si deggan ugula hadlaya. Kuwaani runti waa jahawareersan karaan laakiin leh kaamiro jirka xirtay, muuqaal muuqaal ah ayaa si fudud u kala saari karaya farqiga ama jaceylka ay isku dayayaan inay soo jiitaan. Tani waxay noqon kartaa mid waxtar badan leh marka ay timaado xukunka.
Dabeecad aan wanaagsaneyn oo kaamiro ah, waxaan si dabiici ah u aamineynaa waxaan ku arki karnaa labadeenna indhood, tani waa iska caadi. Had iyo jeer way fududahay in la soo saaro caddeyn fiidiyow ah si loo caawiyo kiis, waxaad ku qaadanaysaa xeerbeegtida ama garsooraha waddada si aad ugu tusto waxa halkaas ka dhacaya. Markay indhahooda ku arkaan, go'aan qaadashadu aad bay ugu fududaaneysaa iyaga.
Soo bandhigista kaamirooyinka jirka xiran, waxaa loo arkaa inay si weyn hoos ugu dhacday cabashada iyo eedeymaha loo haysto saraakiisha booliiska. Dadku waxay u muuqdaan inay u dhaqmaan si ka sii badan oo u hoggaansamaan gaar ahaan markay ogaadaan inay jirto fursad lagu kormeerayo.
Hoos udhac ku yimid sharciga cadaalada dambiyada maadaama dambiilayaashu ay qirteen dambiga lagu soo eedeeyey marqaati fidiyoo fiidiyow ah. Mar haddii lagu qabto ficilkan ayaa tan si fudud loogu arki karaa qofkasta, tani waxay yareynaysaa suurtagalnimada ama rabitaanka qof kasta oo difaacdaaga ah maadaama dhammaan qodobbada caddeynta haddii kale.
Weligeedba waxaa jirtay dhibaato ah waxa booliisku ay qori lahaayeen oo ay xitaa tahay inay wax walba duubaan? Hagaag, tani waa mushkilad weyn, Kamerooyinka jirka waxay leeyihiin awood ay ku burburaan xiriirkii sarkaal boolis uu dhisayay tan iyo markii uu yimid ciidanka. Sidoo kale waa in la ogaadaa in marqaatiyada goobta dembigu jecel yihiin inay qarsoodi ahaadaan oo ay wax kasta oo suurto gal ah iska ilaaliyaan in la diiwaan geliyo. Fikradahan qaarkooda, waxay booliiska ku hagaan sidii ay u isticmaali lahaayeen xallinta waxayna siinayaan cabiro hagi doona isticmaalka. Waxaa jira laba qaab oo ikhtiyaar u leh ikhtiyaarka:
Mid ayaa u baahan sarkaal si uu u diiwaan geliyo dhammaan xiriirkiisa lala yeesho dadweynaha oo aan aheyn kaliya inta lagu jiro wicitaanada, tani waa lama huraan in marwalba la diiwaan geliyo xitaa wadahadalka aan rasmiga aheyn ee lala yeesho shacabka. Laakiin sida ku xusan shuruucda qaarkood, u baahan in sarkaal booliis diiwaan geliyo waxaas oo dhan waxay wax u dhimayaan sirta dadka rayidka ah iyo ku xadgudubka waxay noqon kartaa khalad oo aakhirkii dib loo dhigo.
Midda kale waa in loo baahan yahay in sarkaal uu kaameero kaameero marka uu ka jawaabayo wicitaanada howlahooda. Adeegyadan waxaa ka mid ahaan kara: baarista, taraafikada, xiritaanka, joogsiyada, dabagalka iyo xitaa wareysiga. Lahaanshaha sarkaal diiwaan gelinta goobta dembiga nolosha runtii waxay noqon kartaa runtii caawin kara isla markaana waxay gacan ka geysan kartaa xallinta kiis fal dambiyeed.
Feejignaanku waa shay aad muhiim u ah waana in la dhawro, tani waa mid aad u muhiim ah maadaama aad ku xadgudbi karto asturnaanta rayidka ah tanina waxay sababi kartaa xanaaq. Waa muhiim in la xuso waqtiyada aan la diiwaangelin dhacdo; sida waqtiyadaas oo kale waxay noqon karaan kuwa aan amni lahayn, wax shaqaynaya ama xitaa aan macquul ahayn. Tani, si kastaba ha noqotee, waxay u baahan tahay saraakiishu inay qoraan dukumiintiyo sababta ay u saarayaan kaamarooyinka jirka xirtay.
Markaa haysato kaamirooyin jirka xiran, waxay siisay fursad fiican oo ay ku isticmaali karaan tiknoolajiyadda wajiga lagu aqoonsado si loo aqoonsado shakhsiyaadka ku lug leh kiis. Isticmaalka kaameeradan ayaa u oggolaaneysaa sarkaalku inuu diiwaan geliyo agagaarkooda, illaa iyo hadda waxay leeyihiin xuquuq sharci oo ay ku joogaan. Qayb kale oo diirada la saarayo, ayaa ah inta dhererkan raadinta lagu hayn karo, la isticmaali karo, lagu keydin karo ama loo gudbin karo. Tani waxay sii sii qaybineysaa iyaga oo u kala saaraya muuqaal cad iyo kuwo aan caddayn. Tan hore waxay ka dhigan tahay sawirada loo adeegsan karo ujeeddooyin baaritaan halka kan dambe uu ku lug leeyahay sawirro aan qiimo lahayn ama xiriir la leh baaritaanka, sidaa darteed iyagu waa wax aan faa'iido lahayn. Waa muhiim in la xuso xaqiiqda ah in sarkaalku uu duubi karo wareysiga tuhmanaha, laakiin waa qalad in duubista waraysiga lala yeesho qof kastoo rayid ah wadada. Waa xad gudub khadadkanna waa in aan laga gudbi karin.
Way fiicantahay in la ogaado in kamarada jirka xirtay ay leeyihiin faa iidooyin badan, laakiin sidoo kale waa in la ogaadaa in tababarka la siinayo saraakiisha booliiska iyo in la ogeysiiyo goorta iyo meesha la isticmaalo iyo sidoo kale sida loo isticmaalo. Muhiimadda ka fiirsashada lama dhaafin karo.
Lacag aad u badan oo haddii kale ku bixin laheyd kiisaska maxkamadda ayaa la keydiyay, waa wax iska fudud marwalba inay aad u sahlan tahay in wax laga soo arko muuqaalada oo laga hortago in lagu daro kulanka maxkamadda. Baarayaasha daraasad ay hogaaminayeen sheybaarka ee DC iyo waaxda Booliska ee Magaalada Metropolitan waxay eegeen in joogitaanka kaamirooyinka jirka ay xirtaan saraakiisha ay runtii saameyn weyn ku yeesheen saameyn weyn. Waxay arkeen in saraakiisha leh kaamirooyinka jirka xirtaan ay ku lug lahaayeen kiisaska maxkamada si kastaba ha ahaatee, waxaa jiray waxyaabo badan oo aan la hubin tan iyo markii loo diiday inay galaan natiijooyinka garsoorka.
5 Waxyaabaha Aad Ka Ogaaneyso Kaamirooyinka Jirka Booliiska ahaa kii ugu dambeeyey: October 9th, 2019 by admin
2381 Wadarta Views 11 Views Maanta
Maxuu u Arki Karaa Laydhka Cayrta-Kaamku Waxyaabaha Aan Cadayn
Sababaha Cilmiga Sawirka Kaxadhka ee 'Worn Camera' ayaa laga yaabaa inaanay Waxyaabaha Nadiifin
Xadidista kaamirooyinka jirka xiran ee Booliska
Faa'iidooyinka kaamirooyinka jirka xiran ee Booliska
In kasta oo Xaddidaadaha la hayo, Kaamirooyinka Jidhka Booliisku waa…